Minisiteran'ny aterineto - Ahoana no maha-mpikambana azy ao amin'ny fiangonan'i Kristy?
Ao amin'ny famonjena ny fanahin'ny olona dia misy 2 ilaina: ny ampahany amin'Andriamanitra sy ny anjaran'ny olombelona. Ny anjara asan'Andriamanitra dia ampahany lehibe, "Fa tamin'ny fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa, fandrao hisy hirehareha" (Efesiana 2: 8-9). Ny fitiavana izay tsapan'Andriamanitra ho an'ny olombelona dia nitarika azy handefa an'i Kristy eto amin'izao tontolo izao mba hanavotra ny olombelona. Ny fiainana sy ny fampianaran'i Jesosy, ny sorona eo amin'ny hazo fijaliana, ary ny fitoriana ny filazantsara ho an'ny olombelona dia anjara asan'Andriamanitra amin'ny famonjena.
Na dia ampahany betsaka aza ny anjaran'Andriamanitra dia ilaina ihany koa ny anjaran'ny olona raha mahatratra ny lanitra. Ny lehilahy dia tokony hanaraka ny fepetra famelana izay efa nambaran'ny Tompo. Ny ampahan'ny anjaran'ny olona dia afaka maneho mazava amin'ny dingana manaraka:
Henoy ny Filazantsara. "Ary hataony ahoana no fino izay Olona tsy reny? Ary hataony ahoana no fino izay Olona tsy reny? (Romanina 10: 14).
minoa. "Ary raha tsy amin'ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy; fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Izy sady Mpamaly soa izay mazoto mitady Azy." (Hebreo 11: 6).
Mibebaka amin'ny fahotana taloha. "Noho izany Andriamanitra tsy nijery ny andron'ny tsy fahalalana, fa ankehitriny kosa Izy dia mandidy ny olona fa tokony hibebaka izy rehetra na aiza na aiza" (Asa 17: 30).
Misaotra an'i Jesosy ho Tompo. "Hoy i Filipo, raha mino amin'ny fonao rehetra ianao, dia mety ho azonao izany." Ary namaly izy ka nanao hoe: Mino aho fa i Jesoa Kristy no Zanak'Andriamanitra "(Asan'ny Apostoly 8: 36 -37).
Natao batisa ho famelana ny fahotana. "Ary hoy Petera taminy: Mibebaha, ary aoka samy hatao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo; ary ianareo handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina" (Asa 2: 38).
Miaina fiainana kristianina. "Hianareo voafidy voafidy, mpisorona ho an'ny mpanjaka, firenena masina, vahoaka ho fananan'Andriamanitra, mba hahazoanareo maneho ny hatsaran-toetran'ilay niantso anareo hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga" (1 Peter 2: 9).